GAROONKA AADAN CADDE ma isbaaro ayaa dhex taal mise waa tuugo canshuuraha u soo dhigatay? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA GAROONKA AADAN CADDE ma isbaaro ayaa dhex taal mise waa tuugo ...
GAROONKA AADAN CADDE ma isbaaro ayaa dhex taal mise waa tuugo canshuuraha u soo dhigatay?
Marka aad ka soo daganeeyso iyo marka aad ka baxeeyso waxaad la kulmee shaqaalaha qeybta canshuuraha oo afku labo taako yahay, weeyna ku handadayaan, waxna wey ku weydiisanayaan.
In ay tuugo wax xaddo yihiin iyo in ey burcad wax dhecdo oo isbaaro u taalo yihiin waan kala garan waayay, 3 Sano oo safar aan ku tagaayay waxba isma doorinin, laakiin socodkeeyga u dambeeyay waxaan is lahaa boobkii iyo musuqiiba waa la tirtiray, waase looga daray xaqiiqdii.
Waxaan watay 4 boorso oo mid xamaali ah ii soo qaaday, waxaa ii yeeray qof kamid ah 4 qofood oo midi dumar tahay, waxaa gadaal taagan askari aan hubeysneyn wax u qarsanaa anuu moogi. Waxaa hadalkii igu billaabay ninki markii hore ii yeeray, igumana cusbeyn habdhaqanka meesha ka socdo. Wuxuu i weydiiyay alaabo electronic ah in aan sito iyo in kale?
Waxaan u sheegay wax isticmaalkeyga ka badan inaanan sidan, Wuxuu i weydiiyay inaan bixinaayo min 10$ afarta boorso iyo in uu gudaha geysanaayo oo uuna baaraayo, hadduu alaabaha uu doonayay ku arkana calaa sheey 10$ lagu canshuuraayo. Si fudud ayaan u iri baaro 40$ jeebka kugu ridi maayo macno la’aan. Waxaa dhawaaqday gabadhii xijaabka laheyd “maya ha ka xareyn boorsooyinka malaha waadan is fahminee, yarkow waxaa suurowdo inaa alaabo qaali kugu fadhiyo aad wadato oo 10 iska daaye 30 iyo kabadan lagu canshuuraayo, haddii gudaha lala galo boorsooyinka oo la baaro ogow wax ka qabasho malahane”. Intaan dhoolla caddeeyay ayaan ku dhahay markaas wixi ay naqato canshuurta ayaan 2 u kala bareeynaa, qeybna jeebka gashada qeybta kalane anaa ku tagaayo, waana sidaas xeerka ayaan u raaciyay, Halki iyadoon wax jirin laaluush leyga qaadi lahaay, marki wax leygu qabto waa inuu laaluush yimaadaa.
Wiilki boorsooyinka xareystay intuusan furin waxaa soo muuqday 3 maamooyin soomaaliya oo sideey tahay u raran 😀 intuu kuweyga kasoo tallaabsaday ayuu igu yiri qaado ee bax. Waan kasoo qaatay anoo leh maamooyinka Allow aysan idinku gacan adkaanin.
Marki aan Muqdisho ka soo baxaayayna wiil iyo gabar ayaa sidii lacago u dhuranaayay. Nasiib wanaag markaan waxba leyma weydiinin, gabar iga horeeysayna 2 boorso min 10$ ayaa laga qaaday. Aniga ma ogi sababta, ma gabadhaa tii aan horay u murannay aheyd mise wax kalaa jiray?
Waxaan kusoo gunaanadayaa isweydiimo ah: Waxa ma canshuuro la lunsanayaa mise waa isbaaro caadi ah oo maamulka wax ka og yahay? Qof aan canshuurba saarneyn ama ku waajibin, lacagta laga qaadaahu ma laaluush baa mise waa baad? Bartamaha airportka in 4 qof kugula dooddo ma bareer baa mise waa dhuumaaleysi? 1000 qof oo ama duulay ama soo dagay haddii 10-20$ laga qaaday maalintii waa imisa lacagtaas, yeeysa gacantiisa gashay? Maamulka Maku lug lahaan karaa maadaama aysan aheyn wax qarsoodi ah, mise 4 qofood oo qeybta soo degista fadhida iyo 2 qofood oo qeybta bixidda jogta ayaa ku ilma korsada? Iyadoo 10$ la eryanaayo ma qiyaasi kartaa cadadka canshuuraha ku baaqanaayo ganacsatada?
WAA KAAS WEJIGA UGU HORREEYO EE XAMAR LAGA GALO!! Dad badan ayaa iisoo jeediyay inaan ka aamuso si irsaaqadda dad kale aan caqabad ugu noqonin. Qof mushaar qaadata oo iimaanka laga qaaday miyaan qariyaa?
NEXT TIME I HAVE HIDDEN CAMERA 😛 😛 JIDKA ISBAARO II DHIGO